Ulo oru ntanetị choro igbanwe ahia ka ha no n'ihu | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 8, 2013 Ọ bụ Larry Alton
O doro anya na hasntanetị agbanweela n'ụzọ dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ, nke ahụ bụ eziokwu maka otu ụlọ ọrụ si azụ ahịa azụmahịa ha n'ịntanetị. Onye ọ bụla nwere azụmaahịa chọrọ naanị ileba anya na ọnụọgụ mgbanwe Google mere na nyocha algorithm ya iji nweta nghọta bụ isi banyere etu esi ere ahịa ntanetị agbanweela oge.
Lọ ọrụ ndị na-azụ ahịa na ịntanetị kwesịrị ịkwado usoro ịzụ ahịa ha oge ọ bụla enwere mgbanwe na nchọta algorithms, ma ọ bụ enwere ike ịhapụ ha ruo ebe ahịa ha na-ata ahụhụ. Bob Holtzman nke Mainebiz.com ewepụta ya n'ezoghị ọnụ:
“Ntanetị na - agbanwe ngwa ngwa nke na ihe arụ ọrụ otu afọ gara aga nwere ike ọ ga - adị mma - nke ahụ nwere ike ịkọwa ahịa ịntanetị n’ime afọ iri gara aga. Naanị mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ mechara na-ewu weebụsaịtị mbụ ha, mgbasa ozi mmekọrịta malitere ijide eyeballs na ime ka saịtị ndị dị n'azụ dị ka ihe ochie ma ọ bụ na-adịghị mkpa.
“Ndị bịarutere na Facebook chọtara onwe ha n’oge na nnọkọ Twitter, kwa. Ka ọ na-erule oge ụfọdụ weebụsaịtị malitere itinye ọnụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ekwentị mkpanaaka na-eme ka mgbanwe ndị ọzọ dị ukwuu na nhazi saịtị, ụkpụrụ ụlọ, na ọdịnaya. ”
Mgbanwe ndị a mere n'oge na-adịbeghị anya
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ịntanetị na-emeghachi omume na mgbanwe ahụ mere na mmelite kachasị ọhụrụ nke Google, nke a na-akpọ Hummingbird. Ebumnuche nke mgbanwe algorithm a bụ ịgbanwe ụfọdụ ibu site na nchọta isiokwu na ọchụchọ mkparịta ụka na-achọ azịza nye ajụjụ.
Google ekwuola na ọ chọrọ ịkwalite ọdịnaya (weebụsaịtị) kachasị nwee ike ịza ajụjụ ndị ọrụ, yabụ ọdịnaya gị enweghị ike ịbụ naanị ịkwalite akara ngwaahịa ma ọ bụ akara. Ọ ghaghị ịbụ ihe egosipụtara dị ka ihe bara uru na mbụ. Ozugbo ewuru ntọala a, enwere ike itinye usoro ịre ahịa iji mechie saịtị gị na-enweghị okefe.
Ihe omuma bara uru
Were peeji a si Cleveland Shutters ọmụmaatụ. Isiokwu nke peeji ahụ gụrụ: Nwere windo n'ọnụ mmiri? Achọrọ ihe ngwọta na-arụ ọrụ? N'ebe a, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na ọ na-ekwu okwu banyere nsogbu ndị na-ekiri nwere ike ịnwe.
Ugbu a, ihe na - eme ka ibe a dị iche bụ na ụlọ ọrụ anaghị aga nnukwu mgbidi ederede iji kọwaa ihe mmadụ nwere ike iji windo mmiri mee; o gosipụtara onye nleta ihe oyiyi dị iche iche nke gosipụtara ngwọta maka nsogbu. Onye nwere ike ịbịa na-achọ azịza ọ bụghị naanị nwere ike ịchọta otu, mana ya nwere ike ịhụ otu ngwaahịa Cleveland Shutters si bụrụ azịza na-enweghị mkpọsa ọdịnala.
Mmetụta na-eto eto nke mkpanaka
Ndị ọkachamara na-ekwukwa na ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ekwentị ga-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahịa n'ọdịnihu. "Ntuziaka ebe a na-achọkwu nyocha na ekwentị mkpanaaka karịa kọmputa ndị na-anọghị ọdụ na-abịa ọsọ ọsọ karịa ọtụtụ ndị na-eche," ka Google's Search Engineer Matt Cutts kwuru. "M ga-enwe anya ma ọ bụrụ na anyị na-adịghị anya na-mobile peeji ọsọ n'ime akaụntụ maka SEO."
N'ihi ya, Amawaputala iji atumatu ahia ahia amụbawo 142 pasent n'etiti 2011 na 2013. Ọtụtụ n'ime nke a na-amalite site na mkparịta ụka enyi na enyi nke weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ, nke ndị azụmaahịa dị n'ịntanetị na-elegharakarị anya.
“Ndị na-eji ekwentị n’fersntanet agagharị bụ ụyọkọ chọrọ ihe. Ọ bụrụ na ha gaa na webụsaịtị gị ma ewepụtaghị ya maka ngwaọrụ ha na-eji yana ụzọ dị iche iche ndị ọrụ mkpanaka si akpa agwa, ha ga-ewe iwe ma pụọ, ”ka Ken Barber, osote onye isi azụmaahịa na mShopper.com na-ekwu.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ ga-agbanwe n'ezie, otu ihe Google na-esighị na ya pụta bụ mkpa nke ahụmịhe onye ọrụ dị mma dị ka ihe kachasị mkpa na ibe ogo maka nsonaazụ ọchụchọ. Inye ọdịnaya bara uru na inye ndị ọbịa, site na desktọọpụ na ekwentị, yana ọgaranya, ahụmịhe na-adọrọ mmasị bụ atụmatụ abụọ na-agaghị apụ apụ.